Amaokwu ndị a maara nke ọma - ha si na ha pụta
Okwu | Okwu asụsụ
Na mkpụrụ na bolts
"Na-achị ọchị ka ọkụkọ", "Na tube eguzo", "Otu ụbọchị blaumachen" - a bụ niile nkebi ahịrịokwu na anyị na-eji ndụ kwa ụbọchị, na-enweghị n'ezie maara ebe ha si bịa. Anyị maara ihe anyị chọrọ iji gosi na, na onye ọ bụla na-aghọta ihe n'azụ ya, ma ọ bụrụ na ị na ị na-set nke kere kpomkwem, ha na-emekarị nnọọ na-akpa ọchị ma ọ bụ nye taa adịghị eme ka uche ọzọ.
Idiom - ihe ha pụtara na mmalite
Otutu okwu nwere ike ime na imezi ihe, inye ha ihe ndi ozo. Naanị okwu ndị a nke oge a adịghị emeri ma anyị na-adaghachi na ndị mbụ. Oge eruola ka ị lebakwuo anya na mmalite.
Amaokwu ndị a maara nke ọma kọwara
Egwuregwu na-edozi okwu okwu nke enweghị ike ịgbanwere ihe ndị dị na ya, n'ihi na ma ọ bụghị na foto zuru ezu adịkwaghịzi. Site "ịgha ụgha na-acha anụnụ anụnụ nke eluigwe" apụghị ịbụ "Uhie site na mbara igwe ịgha ụgha", n'ihi na ọ dịghị onye na-aghọta nke a ma ọ na-enweghị uche.
Egwuregwu bụ akara ngosi nke a maara nke ọma na nke a na-asụ n'asụsụ ahụ. Nke a dịkwa na asụsụ ndị ọzọ. Mgbe ọ "na-ezo" anyị, mmiri ozuzo na England "Cats and Dogs" - ya bụ nwamba na nkịta. Na mba a, anyị agaghị aghọta nke a, n'England, n'aka nke ọzọ, otu anaghị aghọta twine ahụ.
Anyị enwetala ọnịrịokwu kachasị ọnụ ma chee na ha "ezé". N'ebe a, ị nwere ike ịhụ n'onwe gị ebe amaokwu kachasị ama nwere agbụrụ ha.
"Ezi akwụkwọ ụlọ akwụkwọ bụ alpha na omega maka ịmalite ọrụ," nne nne Frederike na-achọ, na-ele anya na-atụgharị uche n'ọmụmụ nwa nwa ya. Frederike maara na ọ kwadoghị aha ya na akụkọ afọ nke afọ na azịza ya n'ụzọ dị nro na ọ ga-aka mma n'ime ọnwa isii na-esote.
Kedu ihe okwu ahụ bụ "alpha na omega" pụtara?
Mgbe ahụ, ọ jụrụ nne nne ya ihe mere agụmakwụkwọ ga-abụ alpha na omega maka ịmalite ọrụ. Nne nne ahụ zara, sị: "Nke a pụtara mmalite na njedebe. Ọ bụrụ na ị ṅa ntị nke ọma na ụlọ akwụkwọ site ná mmalite, ị ga-ejedebe oke ogo ma nwee ike ịmụ ihe ọ bụla ịchọrọ. "
Mgbe ehihie gasịrị, Frederike gara ụlọ iji gosi ndị mụrụ ya akara ule. Ọ nọgidere na-eche echiche ihe kpatara nne nne ahụ ji dee A n'ihi mmalite ma O maka njedebe. Ma eleghị anya mama gị enweghị ike ịgụ na ide ihe kwesịrị ekwesị?
Nne Frederike ga-achị ọchị banyere okwu nwa ya nwanyị ma kwuo, sị:
"Akwụkwọ edemede Grik nwere A maka Alpha dị ka akwụkwọ mbụ na O maka omega dịka akwụkwọ ikpeazụ. Nkebi ahịrịokwu ahụ sitere na nsụgharị nke Bible site n'aka Martin Luther. N'ime ya, Chineke na-ekwu, "Mụ onwe M bụ Alfa na Omega, mmalite na njedebe ..." Okwu ndị a sitere na Mkpughe nke John na nne m maara ikwu: "Nke a pụtara; onye nwere mmalite na njedebe nke ihe ọ na-ele anya, onye nwe ya dum. N'ihi ya, a na-egosipụta ikike nke ihe ọmụma. "
Obi tọrọ Frederike ụtọ ma kpebie na n'ọdịnihu, ọ ga-achọ ilekwasị anya na ihe niile ma melite ogo akwụkwọ.
Anke dị mwute. Ọ chọrọ iso enyi ya kacha mma gaa fim, ma ọ kwụsịrị na oge ikpeazụ. Stefan, nnukwu nwanne Anke, na-agbalị ịkasi ya obi. "Mgbe ahụ, ị ​​ga-aga na fim echi, ọ bụghị nke ahụ dị njọ."
Kedu ihe okwu ahụ bụ "isi ihe" pụtara?
"Echi abughi ugbo vidio ma ihe nkiri a na-efu ugwo abuo. Ihe kpatara ya bu, enweghm ego di n'akpa uwe. "
Ọ bụghị ọnọdụ dị mma, mana ị ga-achị ọchị okwu ahụ na nkwupụta ahụ.
Kedu ihe bụ isi ihe? Ihe edemede a na-awụli elu na-agbada elu na ala? Ma ọ bụrụ na ọ dị, gịnị ka nke ahụ metụtara na nkwupụta ahụ?
Ahịrịokwu ahụ na-egosi ịdị ngwa ma ọ bụ mkpa. O sitere n'aka Aristotle, bụ onye ghọtara na nkedo akwa nke anụ ọkụkọ nwere obere oghere na-awụda elu ma na ala mgbe nwa ọkụ na-agbanwe.
Ebe a dị ntakịrị bụ obi ma si otú a bụrụ akụkụ kachasị mkpa nke ọkụkọ na-eto eto. Ya mere, okwu ahụ dị na nkwupụta ahụ na-ezo aka n'ihe kachasị mkpa ebe a.
Na-ekwu ego ego efu
Idiom Na-anwụrụ a agba
Na-ekwu na ịnọ na 180
Egwuregwu - Aga m ehicha ụra
Idiom - Nwee igbe n'ihu isi gị
Egwuregwu - Owuwu ihe owuwu
German okwu ọnụ ọchị na English | ọchị